Brexit: Qodobbadii sharciga ahaa ee kalaguurka oo laga heshiiyay – Kasmo Newspaper
Updated - March 20, 2018 1:05 pm GMT
London (Kasmo), Britain iyo Midowga Yurub ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan xilliga kalaguurka Brexit, iyada oo wakiillada wadaxaajoodka 2da dhan, Michel Barnier (EU) iyo David Davis (UK) ku tilmaamen dhacdo kama dambays ah.
Sida heshiisku qorayo Britain waxay wadahadallo ganacsi la gali kartaa dalalka kale ee Yurub inta lagu jiro 21ka bilood ee kalaguurka oo bilaabanaya marka UK rasmi ahaan uga baxdo Midowga, 29ka March 2019 ilaa Dicember 2020.
Si kastba ha ahaatee Britain, si ay heshiiska u gaarto, waxay samaysay tanaasulaad ay ka mid yihiin xuquuqo kala duwan oo la siinayo muwaadiniinta EU ee soo gali doona UK muddada kalaguurka dhexdeeda, taas oo markii hore ku koobnayd kuwa horey u ii joogay dalka.
Dhanka xadka Ireland-Nord Ireland, oo noqon doona midka u dhexeeya UK iyo EU, 2da dhan waxay ku dadaaleen sidii lagu heli lahaa xal wadahadallada lagu joogteeyo xadkuna ku sii furnaado, si loo nabadeeyo kooxaha Katooliga iyo Protestan-ka.
Laakiin Wakiilladu waxay caddeeyeen in aanay xilligaan garanayn nooca xalka u cuntami karaya 2da dhinac, Barnier wuxuu sheegay in fikrad ahan loo qabo in Nord Ireland ka sii mid ahaato Midowga Kastammada Yurub, haddii aan la keenin fikrad ka habboon, si isu socodka dadka iyo ganacsiga loo sii joogteeyo.
Qodobbada kale ee ilaa hadda aan xalka laga gaarin waxaa ka mid ah kaalinta Maxkamadda Sare ee Caddaaladda Yurub ku yeelan doonto arrimaha Britain.
Shir jaraa’id oo Isniintii, 19 March, lagu qabtay Brussels, Barnier wuxuu ka caddeeyay in heshiisku yahay tillaabo muhiimah oo loo qaaday dhanka ka bixitaanka Midowga Yurub ee Britain. Qoraalka heshiiska waxaa maalinta Jimcaha, 23 March, la hor dhigi doonaa kulanka madaxda Midowga Yurub.